विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने संख्या २८ लाख हजार, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित ? Canada Nepal
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने संख्या २८ लाख हजार, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित ?
काठमाडौं - पछिल्लो समय विश्वका केही देशमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । केही समयअघि कम कोरोना संक्रमित फेला परेका भारत लगायतका देशमा फेरि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ ।
कोरोनाका कारण विश्वका विभिन्न देशका धेरै नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको छन्। अहिले विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना खोप पनि लगाउन शुरु गरिएको छ ।
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १२ करोड ८२ लाख ४० हजार ३ सय ९ पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २८ लाख ४ हजार ३ सय ४६ पुगेको छ ।
त्यस्तै हालसम्म विश्वमा १० करोड ३४ लाख ६२ हजार २८ कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भइसकेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट ५ लाख ६३ हजार २ सय ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ३ करोड १० लाख ३३ हजार ८ सय १ पुगेको छ ।
त्यस्तै ब्रजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या ३ लाख १४ हजार २ सय ६८ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या १ करोड २५ लाख ७७ हजार ३ सय ५४ पुगेको छ ।
चैत्र १७, २०७७ मंगलवार १०:११:२२ बजे : प्रकाशित
विश्वभर कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३३ लाख ८३ हजार, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ?
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १६ करोड ३१ लाख ६५ हजार ५ सय ७३ पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३३ लाख ८३ हजार २ सय ३० पुगेको छ ।
त्यस्तै हालसम्म विश्वमा १४ करोड १४ लाख ६२ हजार १ सय ४६ कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भइसकेका छन् । त्यस्तै अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट ५ लाख ९९ हजार ८ सय ६३ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ३ करोड ३६ लाख ९५ हजार ९ सय १६ पुगेको छ । यस्तै अमेरिकामा २ करोड ७० लाख ९८ हजार ६ सय २० कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।
त्यस्तै ब्रजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या ४ लाख ३४ हजार ८ सय ५२ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या १ करोड ५५ लाख ९० हजार ६ सय १३ पुगेको छ । यस्तै एक करोड ४० लाख ६२ हजार ३ सय ९६ निको भइसकेका छन् ।
जेठ २, २०७८ आइतवार ०८:४३:३९ बजे : प्रकाशित
होक्काइडोमा भूकम्पको धक्का
टोकियो – जापानको होक्काइडो प्रिफेक्चरमा आइतबार ६.१ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प गएको जापानी मौसम विज्ञान विभाग (जेएमए) ले जनाएको छ ।
भूकम्प त्यति शक्तिशाली नभएको भन्दै सुनामीको चेतावनी नदिइएको विभागले जनाएको छ ।सिन्ह्वा
जेठ २, २०७८ आइतवार १३:५१:३४ बजे : प्रकाशित
विश्वको सबभन्दा व्यस्त विमानस्थलका प्रमुख भन्छन् - खोप राहदानीको विकल्प छैन
काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूको लागि विश्वको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थलका प्रमुखले कोभिड राहदानीहरू नै अब व्यापक रूपमा वैदेशिक यात्रा पुन: निरन्तर गर्ने बाटो भएको बताएका छन्। दुबई विमानस्थलका प्रमुख कार्यकारी पल ग्रिफिथले बीबीसीलाई भने, "मलाई लाग्दैन यसको अन्य विकल्प छ।"
डिजिटल प्रणालीहरूका आलोचकहरूले त्यसले खोप पाउन नसक्नेहरूप्रति विभेद हुने मत राखेका छन्। ग्रिफिथले आफू त्यस्तो दस्ताबेजको पूर्ण समर्थक भएको बताउँदै त्यसलाई 'अपरिहार्य' बताएका छन्।
"मलाई लाग्छ समस्या खोप राहदानी र त्यसको विभेदको होइन। विश्वव्यापी समतामूलक खोप कार्यक्रम आवश्यकता हो," उनले भने। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) र विश्व यात्रा तथा पर्यटन परिषद् भने खोप राहदानी विरोधी मत राख्नेमध्येका हुन्।
त्यसले 'दुई तहको समाज' सिर्जना गर्छ भन्ने यतिखेर धेरैको चिन्ता पाइन्छ। गत महिना डब्ल्यूएचओका डा. माइक रायनले खोप राहदानीका विषयमा उठ्ने नैतिक र निष्पक्षताको चासो दोहोर्‍याएका थिए। उनको भनाइ थियो, "पुरै असमान रूपमा विश्वमा खोप वितरण भइरहेका बेला यी कुराबारे सोच्नुपर्छ।"
सरकारहरूले लगाइरहेका प्रतिबन्धहरू र यात्रुले गुमाएका आत्मविश्वासका माझ थलिएको उड्डयन क्षेत्र निकै व्यग्रतापूर्वक तङ्ग्रन खोजिरहेको छ। एयर ट्रान्सपोर्ट कार्य समूहका अनुसार महामारीअघि यस क्षेत्रले विश्वको अर्थतन्त्रमा वार्षिक ३५ खर्ब डलर योगदान पुर्‍याउँथ्यो।
त्यसले यस क्षेत्रका विश्वका अन्य ठाउँझैँ दुबई विमानस्थलसमेत नराम्ररी थलिन पुग्यो। त्यसका बाबजुद पनि सन् २०२० मा लगातार सातौँ वर्ष दुबई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको लागि विश्वको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल हुन पुग्यो। सन् २०१४ मा दुबईले लन्डन हिथ्रो विमानस्थललाई उछिनेको थियो।
जेठ २, २०७८ आइतवार १५:३८:१७ बजे : प्रकाशित
# खोप राहदानी
# व्यस्त विमानस्थल
भारतले उत्पादन गरेको कोरोनाविरुद्धको खोप प्रभावकारी
काठमाडौँ। भारत बायोटेकले कोभाक्सिनको सम्बन्धमा ठूलो दावी गरेको छ। उसले कोभाक्सिन भारत र बेलायतमा फेला परेको कोरोनाको स्ट्रेनविरुद्ध प्रभावकारी रहेको जनाएको छ। भारत बायोटेकले आइतबार कोभाक्सिन भारत र बेलायतमा फेला परेको कोरोनाको स्ट्रेनविरुद्ध प्रभावकारी रहेको बताएको छ।
भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण दैनिक तीन लाख भन्दा बढी नयाँ संक्रमित फेला परिरहेका छन्। विगत १५ दिनदेखि हजारौं संख्यामा मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। अहिलेको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै कोरोनासँग लड्न खोप नै महत्वपूर्ण तरिका मानिएको छ। भारतमा अहिलेसम्म करिब १८ करोड व्यक्तिलाई खोप लगाइएको छ।
भारतमा अहिलेसम्म सेरम संस्थान र भारत बायोटेकले तयार पारेको खोप सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ। कोभाक्सिन भारतले आफैँ उत्पादन गरेको खोप हो। जबकि, कोभिशिल्ड अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्रेजेनाद्वारा उत्पादन गरिएको खोप हो। यो पुणेको सेरम इन्स्टिच्यूटले निर्माण गरिरहेको छ।
जेठ २, २०७८ आइतवार १९:०१:१९ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - भारतको दिल्लीमा थप एक साता लकडाउन थपिएको छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमण घट्दै गए पनि फेरि मे २४ सम्म थप गर्ने मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले निर्णय गरेका हुन् ।
लकडाउनकै कारण कोरोना नियन्त्रणमा आएको भन्दै लकडाउन लम्बाइएको केजरीवालले बताएका छन् । उनले लकडाउन नै कोरोना नियन्त्रणको मुख्य उपाय भएको बताएका छन् ।
यसअघि दिल्लीमा मे ३, मे १० र १७ मेमा गरी तीन पटक लकडाउन बढाइएको छ । दिल्लीमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ सयको आसपास रहेको छ ।
जेठ २, २०७८ आइतवार २२:१०:४६ बजे : प्रकाशित